Ngifundise ngesifo sikashukela - isifo lalivamile futhi iyingozi, nokho ngokuvamile atholakala yesimanje Endocrinology umkhuba. Futhi njengoba enjalo angaphansi isifo, futhi izingane, abazali abaningi banesithakazelo imibuzo mayelana nendlela ibukeke izimpawu eziyinhloko sikashukela ezinganeni. Phela, ukuphathwa ngokushesha waqala, cishe ukuthuthukisa eziyingozi.
Ngo inqubo yokwelapha yesimanje, ukuhlukanisa izinhlobo ezimbili eziyinhloko zesifo. Futhi izibonakaliso sikashukela ingane ngokwengxenye kuxhomeke ezihlukahlukene sifo.
isifo esingelapheki, okuyinto lihlotshaniswa kahle glucose umzimba - Kuyaziwa ukuthi sikashukela ezaziwayo. Ngenxa yalokho wanoma iziphi izinguquko waphawula yikuphi ukwephula insulini uketshezi noma ukwehla nozwela amaseli kule hormone.
Ngakho, abantu abanesifo sikashukela sohlobo lokuqala kuhambisana iziyaluyalu kwamanyikwe - amaseli ethize phezani umane synthesize insulin amanani edingekayo. Ngakho, ukwanda elibukhali amazinga igazi glucose. Kuyinto lolu hlobo sifo ngokuvamile kubonakala izingane. Phela, lesi sifo ngokuvamile sitholwa njengefa. I kuphela ikhambi kungenzeka kulokhu kukhona umjovo insulini.
• Type II sikashukela kuhambisana ukwehla nozwela yeselula insulini receptor. Lokhu kusho ukuthi ngisho noma hormone is kuhlelwe umqondo ngobungako edingekayo noma eyayenziwe kwethulwa - umzimba akasabeli ke. Kulokhu, ukuphathwa kuyehla kube ukudla okuqinile.
Izimpawu zesifo sikashukela e ingane
Ngeshwa, kusaqalwa zesifo awuboni kube lula kangaka, njengoba ukwephulwa ekhona nje musa ukubamba iso. Ngakho yiziphi izimpawu ngifundise ngesifo sikashukela kuthiwa ukwambulwa kakhulu? Kunini lapho kufanele ngithinte ukhathazeke?
Into yokuqala kufanele sinake - lena inani uketshezi eyanele ingane. Yiqiniso, e wonke umuntu evamile kufanele baphuze okungenani 1.5 amalitha amanzi ngosuku. Kodwa ukwanda igazi glucose kubangela ukwehluleka esilinganisweni se-electrolytic. ukoma Extreme - indlela ukwehlisa ushukela okuhlushwa. By the way, izingane ogulayo aphuza inqwaba ngisho isizini abandayo.
Njengoba ingane ophuza kakhulu, umzimba kumelwe ngandlela-thile ukuhoxisa uketshezi. Ngakho, kukhona polyuria. Izingane sikashukela ukuya ethoyilethi izikhathi 10-20 ngosuku. Bavame uvuke izikhathi eziningana ebusuku zishobinge. Kaningi lokhu kuhambisana nokubuka hormone iziyaluyalu enuresis.
Kome nolwelwesi lwamafinyila kanye isikhumba - lawa izimpawu zesifo sikashukela ezinganeni. Ngempela, ngaphandle emzimbeni ivame ukuba wehlise igazi glucose lokuhlala kanye kulokhu esebenzisa uketshezi isikhala intercellular, uma kunesidingo.
Kuwufanele benaka umbono wengane. Iqiniso lokuthi isamba ngokweqile glucose iqala ukuba zibekwe izitho ezihlukahlukene, futhi ikakhulukazi kwi -lens iso. By the way, bakhulise izinga ushukela elula egazini Uphatha kabi umsebenzi we analyzer ezibukwayo, njengoba kubangela hhayi kuphela ingaphazamisi lens, kodwa futhi ukubhujiswa imithambo yegazi retina (angiopathy).
Kufanele uqale sokukhathazeka uma Ingane yaqala ngokushesha ukunciphisa umzimba. ukukhathala okungamahlalakhona nobuthakathaka - ubuye uphawu ngifundise ngesifo sikashukela ezinganeni kanye intsha. Kaningi, izingane uphethwe efanayo uhlushwa ukukhathala - ekugcineni lizinga lekuphumelela zabo esikoleni ingaphansi kakhulu kuneningi ontanga yabo.
Ephambi kwezinduna lezi zimpawu kumele ngokushesha ukukhombisa ingane kudokotela-endocrinology futhi ukuhlolwa igazi ushukela. Ukwelapha ngokushesha waqala, cishe kuyoba ukuthuthukiswa of ikhoma sikashukela nezinye izinkinga.
Spring imiqulu - i dish engavamile phezu kwetafula
Streptoderma: izimpawu, uphethwe, ukuphathwa